Beelihii ku dagaalamay Mudug oo xalintooda lagu guuldareestay . Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
Beelihii ku dagaalamay Mudug oo xalintooda lagu guuldareestay . Gudi isku xilsaaray dhexdhexaadinta beelo ku dagaalamay deegaanada Mudug iyo Galgaduud ayaa waxa uu sheegay in uu ku guuldareestay xalinta beelahaasi.
Iyadoo deegaanada Mudug iyo Galgaduud ay ka jiraan dagaal beeleedyo u dhaxeeya beelo kasoo kala jeeda deegaanada Galmudug iyo Ximan iyo Xeeb ayaa waxaa ka hadlay dagaaladaasi Gudi ku howlanaa dhexdhexaadinta labada dhinac.
Gudoomiyaha Gudigaasi Bashiir Warsame ayaa sheegay in ay ku guuldareesteen dhexdhexaadinta beelaha dirirsan kadib markii sida uu sheegay ay ka dhaadhicin waayeen inay heshiiyaan, waxaana sidaasi awgeed uu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay gacan ka gaystaan cidii awooda arintaasi.
Dhowr jeer hore ayaa waxaa ka dhacay deegaanada Mudug iyo Galgaduud dagaal beeleedyo uu dhiig badan ay ku daateen, iyadoo ilaa hada aysan jirin wax laga qabtay dagaaladaasi oo mararka qaar dib u bilowda.